Inona avy ireo tombony azo amin'ny fefy vy?
Tombony amin'ny fefy vy: tanjaka sy hamafisana. Amin'izao fotoana izao, matetika ny olona dia mahita ny karazana vokatra vy amin'ny fiainany. Mino aho fa tokony ho fantatry ny ankamaroan'ny olona fa rehefa mampiasa vy toy izany ianao dia ho hitanao fa tena avo dia avo ny hamafiny sy ny tanjany. Na marotoa na tapaka amin'ny tànana dia tsy afaka ...
Inona no mila jerenao rehefa mividy fefy tadim-bolo?
Ny fefy tariby misy valisoa dia vokatra fiarovana azo antoka ampiasaina manokana manodidina ny seranam-piaramanidina. Ny fefy tariby misy barany dia vita amin'ny tariby vy ambany karbaona avo lenta na tariby alimika manezioma aliminioma amin'ny fantsom-bozaka. Ny tombony azo amin'ny fefy tariby misy bararata dia rafitra ankapobeny tsotra, installa mety ...
Fefy amin'ny fefy tadim-boaloboka milentika 500mm mafana
Ny fefy tadim-bolo dia fiarovana fiarovana harato tariby ampiasaina amin'ny sakana amin'ny sisintany, fitokanana ny lalamby sy ny arabe, ny faritra misy ny faritra sy ny faritra ary ny fisorohana ny valanaretina. Izy io dia manana tombony amin'ny famokarana sy ny famokarana tsotra, ny fampiharana ara-tontolo iainana matanjaka, ny fametrahana haingana ny ...
Fomba fikajiana fametrahana sy fandrakofana halavan'ny tranom-borona mihodina
Ahoana ny fomba fikajiana ny halavan'ny rakotra tariby misy tadiny? Ity manaraka ity dia ny fomban-kevitra nofintinin'ny departemantan'ny teknikan'ny orinasanay, izay azo zaraina ho karazany roa toy izao: 1. Algorithm ho an'ny fandrakofana ny halavan'ny tariby misy tadiny iray (amin'ny ankapobeny ny mpanjifa tsy ...
Famaritana ny fanohanan'ny Column Wage Rolling Cage Column
Ny fanohanana ny tsanganana tadin'ny barbed dia vita amin'ny 50x30mm tariby tranom-boaloboka matevina 2mm Q235 fantsom-by vy (na 50mmx50mmx4.5mm Q235 zoro vy) ary takelaka vy roa Q235 miaraka amin'ny sakany 50mm, ny hatevin'ny 4.5mm, ary ny halavan'ny 246mm ary 428mm avy. Ny tapany ambony amin'ny fitaratra ...
Iza no manapa-kevitra ny amin'ny vidin'ny fametrahana ny tranom-baravarankely.
Betsaka ny mpanjifa no sahiran-tsaina momba ny vidin'ny fametrahana azy rehefa mividy takelaka tariby barbed. Ireto misy sosokevitra vitsivitsy ho anao. Ny zava-dehibe indrindra amin'ny fametrahana ny tranom-baravarankely dia mifototra amin'ny topografia. Misy fahasamihafana tanteraka eo amin'ny vidin'ny fametrahana ...